DAAWO: Bangiga Aduunka oo amaanay geedi socodka dhaqaale ee Soomaaliya.
MUQDISHO(P-TIMES) – Bangiga Aduunka ayaa ku amaanay dawladda Faderaalka Soomaaliya in ay wax badan ka qabatay hanaanka Maaliyadeed ee dalka, waxaana la xaqiijiyey in sannadkan kor u kac balaaran uu ka jiro hanaanka dhaqaalaha ee dalka kasoo kabanaya dagaalada mudada dheer.
Bangiga ayaa sheegay in kororka dhaqaalaha ama kobocu uu sannadkan gaaray 2.9%, taas oo 1% ka sareysa sannadkii hore ee laga soo gudbay, waxayna sheegeen in si wanaagsan ay wax ku socdaan.
Bangiga ayaa amaanay dadaalka canshuur aruurinta ee dawladda Faderaalka Soomaaliya, waxayna sheegeen in ay dadka Soomaaliyeed dib uga soo kabanayaan dhibaatooyin dhaqaale oo mudo dheer ay ku jireen.
Madaxweyne Denni oo qalinka ku duugay arin aysan ku farxin ciidamada P/land
Somaliland oo u gaashaamatay dagaal hor leh & Puntland oo ciidamo soo dhoobtay
Booliska Somalia oo gacanta kusoo dhigay gabadh la raadiyey muddo badan
Caasimada labaad ee Somaliland oo lagu dilay askari ka tirsan ciidamada Booliska
DAAWO:Muuse Biixi oo sameeyey fal aysan samayn madaxdii ka horeeyey
Jadwalka doorashada madaxweynaha maamulka Galmudug oo lasoo saaray